ဓမ္မလက်ဆောင်: *~~~45 ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတကျမ်းသစ္စာဆိုခြင်း~~~*
*~~~45 ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတကျမ်းသစ္စာဆိုခြင်း~~~*
မနေ့ က အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သမိုင်းဝင်နေ့ တနေ့ လို့ မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ကြတဲ့ သမ္မတကျမ်းသစ္စာဆိုတဲ့အခမ်းအနားကို အိမ်မှာ TV ကနေ အစအဆုံးကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။
ကျောင်းအလုပ်တွေမအားမလပ်ရှိတဲ့ကြားကပဲ အချိန်ယူပြီး ဗဟုသုတအဖြစ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။
အလွန်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ နိုင်ငံရေးဗဟုသုတ ဘာသာရေးဗဟုသုတ နဲ့ လူတွေရဲ့
နိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ စည်းစနစ်ကျကျ တည်ဆောက်ထားတဲ့ အစိုးရဖွဲ့ စည်းပုံတွေ
ကောင်းမွန်တဲ့စနစ်တခုကို ဆက်လက်ကျင့်သုံးပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ ဒီမိုကရေစီနဲ့ 
လူ့ အခွှင့်အရေးကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ နိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံအဖြစ် ကြီးကျယ်ခန်းနားစွာရပ်တည်နေတာတွေဟာ
ပြီးခဲ့တဲ့ အိုဘားမား သမ္မတ စဖြစ်ချိန် ကျမ်းသစ္စာဆိုပွဲမှာ
သမ္မတ ဂျော့ဘုရ်ှက အာဏာလွှဲပြောင်းပေးတဲ့အခါ တတိုင်းတပြည်လုံးမှာ
ဆန္ဒပြပွဲတစုံတရာမှမရှိပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ တာဝန်ယူလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်...။
ယခု အိုဘားမားဆီကနေ ဒေါ်နယ်ထရန့် အာဏာလွှဲပြောင်းယူတဲ့အခါမှာတော့
ဆန္ဒပြပွဲတွေ ကားတွေကိုမီးရှို့ ဖျက်ဆီးပြီး အဓိကရုန်းတွေရုန်းရင်းဆန်ခတ်မူ့ တွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုတွေ့ ရပါတယ်။
အဆိုးဆုံးကတော့ ဆန္ဒပြပွဲမှာ အလွန်ငယ်ရွယ်တဲ့
ကလေးငယ်တွေ ပါဝင်ပြီးမီးတွေရှို့ ကြတာပါပဲ...။
မိဘတွေရဲ့ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းမူ့ တွေ၊ သွန်သင်ဆုံးမမူ့ မရှိတဲ့ ပညာမဲ့လုပ်ရပ်တွေ၊
တိုင်းပြည်အတွက် မလုပ်သင့်တဲ့လုပ်ရပ်တွေ ဟာ
သူတို့ မိဘတွေမှတဆင့် သူတို့ သားသမီးတွေကို
ဒါဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့ အနာဂတ်အတွက် အင်မတန်မှဆိုးရွားတဲ့ လဏ္ခာတွေပါ။
နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာ၊ လူမျိုးရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာ
How can one imagineaworld where children have no morals,
principles, or values? It would be wrong, wicked, and revolting.
ဒီနေရာမှာဘာကိုတွေ့ ရသလဲဆိုတော့ အသိဥာဏ် အဆင့်အတန်းခြင်းမတူတဲ့
လူတန်းစားနှစ်မျိုးနှစ်စား ကွဲပြားခြားနားမူ့ ကြီးကိုပါပဲ...။
ရီပါပလေကန်ပါတီကအသိဥာဏ်ရှိရှိ တာဝန်သိသိနဲ့ကလေးရောလူကြီးရော
ဆန္ဒပြခြင်းလည်းတစုံတရာ မရှိပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ကြပေမယ့်
ယခု ရီပါပလေကန်ပါတီကအနှို်င်ရပြီး ဒီမိုကရက်တစ်တွေရှုံးတဲ့အခါမှာတော့
အဆင့်အတန်းမရှိတဲ့ စရိုက်တွေ ပေါ်ပေါက်လာတော့တာပါပဲ...။
ဒီလိုပေါ်ပေါက်လာတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို သူတို့ ပါတီက တာဝန်ရှိသူတွေက
အိုဘားမားသမ္မတဖြစ်စဉ်အခါမှာ လူမျိုးရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အသားအရောင်ခွဲခြားတဲ့
လူမျိုးရေးဝါဒကိုအစွဲရှိတဲ့ အိုဘားမားကိုလုံးဝလက်မခံနိုင်ကြတဲ့ ရီပါပလေကန် ပါတီဝင်တွေမြောက်များစွာရှိခဲ့ပေမယ့် မည်သူကမှ အောက်တန်းကျတဲ့လုပ်ရပ်တွေကို
မလုပ်ပဲ တိုင်းပြည်ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ဥပဒေဘောင်အတွင်းမှာ နိုင်ငံသားကောင်း
ယခု ထရန့် သမ္မတဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်း
ထိုးနှက်ပုတ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်အချို့ ကိုခေါ်ယူပြီး သူ့ ရဲ့အစိုးရအဖွဲ့ မှာ တိုင်းပြည့်ရဲ့အရေးကြီးတဲ့နေရာတွေမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့ ခန့် အပ်ခဲ့ပါတယ်...။
အစိုးရအဖွဲ့ ကိုဖွဲ့ စည်းတဲ့အခါမှာလည်း အရင်သမ္မတ အဆက်ဆက်က လုပ်ခဲ့တဲ့
လုပ်နည်းလုပ်ဟန်အတိုင်း သူတို့ ရဲ့ပါတီဝင်တွေကိုပဲ သူတို့ ရွေးချယ်တင်မြှောက်ချင်တဲ့နေရာ သူတို့ ကြိုက်တဲ့နေရာမှာ တင်မြှောက်ခြင်းမျိုးမဟုတ်ပဲ သူ့ အရည်အချင်းနဲ့ သင့်တော်မယ့်
လူတွေကိုရွေးချယ်ပြီး မည်သူ့ ကိုမှ မျက်နှာလိုက်ခြင်း ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိပဲ
လူမှန်နေရာမှန် တာဝန်ခန့် အပ်ခဲ့ပါတယ်...။
သူ့ ကိုထောက်ခံကြတဲ့ သူ့ ပါတီဝင်တွေက
သူ့ ရဲ့လုပ်ရပ်ကို အံ့သြခဲ့ကြပါတယ်။
ကျမ်းသစ္စာဆိုတဲ့နေ့ မှာ ဒေါ်နယ်ထရန့် က သူအသက် ကိုးနှစ်အရွယ်မှာ
သူ့ မိခင်က သူ့ ကိုပေးခဲ့တဲ့ Bible ကျမ်းစာအုပ်ကို ကိုင်ပြီး ကျမ်းသစ္စာဆိုခဲ့ပါတယ်...။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း ၆၁ နှစ်က သမာကျမ်းစာအုပ်လေးဟာ ဒီနေ့ အထိ သားတယောက်ရဲ့လက်ထဲမှာ
ရှိနေခဲ့တယ်... သူ့ ရဲ့မိခင် သူ့ နှလုံးသားထဲမှာသူနဲ့ အတူရှိနေတယ်... သူ့ မိခင်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာတွေကို
ဒီနေ့ ဒီအချိန်မှာသူဖြစ်အောင် ကျိုးစားခဲ့တယ်လို့သူ့ ကိုလူတွေက အံ့သြချီးမွမ်းဂုဏ်ယူခဲ့ကြပါတယ်။
သူဟာ သန်းပေါင်းများစွာသော မိခင်ဖခင်တွေရဲ့ သားသမီးတွေအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာတရားနဲ့ 
မိဘတိုင်းက သားသမီးတွေကို ကောင်းကင်ကကြယ်ကို ဆွတ်ခူးယူပြီး အကောင်းဆုံး
ဖြစ်စေချင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့ ပြယုဂ်တခုလည်းဖြစ်ပါတယ်...။
သူ့ အသက်၂၂ နှစ်မှာ ပင်ဆယ်ဗေးနီးယားတက္ကသိုလ် မှစီးပွားရေးနဲ့ ဘွဲ့ ရရှိခဲ့ပြီး
သူ့ မိဘတွေရဲ့ ဆောက်လုပ်ရေး ကုမ္ပဏီကိုဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အခါမှာ
ကမ္ဘာ့ အချမ်းသာဆုံးစာရင်းဝင်တယောက် ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်...။
ထို့ အပြင် သူဟာလူပီသတဲ့ လူသားဆန်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်...
ရွေးကောက်ပွဲအချိန်အတွင်း ဟီလာရီနဲ့Debate လုပ်တဲ့အခါမှာ
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ abortion လုပ်ရပ်ဟာ
မိမိရင်သွေးကို သတ်တာပဲ ဒါဟာရက်စက်ပြီး လူသားမဆန်တဲ့အတွက်
လက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ ဟီလာရီရဲ့ထောက်ခံမူ့ ကိုဆန့် ကျင်ခဲ့တဲ့သူပါ...။
သူဟာအလွန် တာဝန်ကျေတဲ့ စည်းကမ်းလည်းကြီးတဲ့ဖခင်တယောက်ဖြစ်တယ်လို့ 
သူဟာအခြား သမရိုးကျ နိုင်ငံရေးသမားတွေလို နိုင်ငံရေးကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတခုလို
ရပ်တည်ဖို့ အတွက် နိုင်ငံရေးလောကထဲ ၀င်ရောက်လာတာမဟုတ်ပဲ ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်အနေနဲ့ 
သူကျွမ်းကျင်တဲ့ စီးပွားရေးနယ်ပယ်ကနေ တိုင်းပြည်ရဲ့ စီးပွားရေးကို
ပြန်လည်တည်ထောင်ပြီး လူတိုင်းကို ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့
သူ့ ရဲ့အဆိုကတော့ "Make The United States Great Again"ဆိုတာပါပဲ...။
လူဖြစ်ရတဲ့ခဏတာအချိန်အတွင်း မိမိ သူတပါး လောကကောင်းကျိုးအတွက်
စွမ်းစွမ်းတမံ ဆောင်ရွက် သယ်ပိုးကြရင်း သူတို့ ရဲ့စွမ်းဆောင်မူ့ တွေ
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က သူတော်ကောင်းတယောက် လောကကြီးမှာ
မွေးဖွားလာပြီဆိုရင် အဲဒီသူတော်ကောင်းရှိတဲ့ မိသားစု၊
သူတော်ကောင်းရှိတဲ့အရပ် သူတော်ကောင်းရှိတဲ့မြို့ 
ဒါကြောင့်မို့ လည်း လောကကြီးကို ကောင်းသောလာခြင်းနဲ့ မွေးဖွားခဲ့တဲ့သူတွေ
Our Lord Buddha Bless America!
ထရန့် ဂျူနီယာနဲ့သူ့ ရဲ့မေမေ
ဒေါ်နယ်ထရန့် ရဲ့ Vice President Micheal Richard Pence...
Posted by Dhamma Latsaung at Sunday, January 22, 2017
စကားအင်္ဂါ ( ၅ ) တန်
( ၁ ) ကာလ = ပြောသင့်သောအခါမှပြောရာ၏၊ အချိန်မတန်လျှင်မပြောဆိုရာ ။
( ၂ ) သစ္စာ = အမှန်ကိုသာပြောဆိုရာ၏၊ မမှန်မကန် လုပ်ကြံမပြောဆိုရာ။
( ၃ ) သဏှာ = နူးညံ့ချိုသာစွာပြောဆိုရာ၏၊ ခက်ထန်ရင့်သီးစွာမပြောဆိုရာ
( ၄ ) အတ္တံသဟိတ = အကျိုးစီးပွားဖြစ်မည့်စကားကိုသာပြောဆိုရာ၏။
( ၅ ) မေတ္တာစိတ္တ = မေတ္တာရှေ့ ထားပြောဆိုရာ၏၊ ဒေါသမောဟဖြင့်မပြောဆိုရာ။
( အင်္ဂုတ္ထိရ်ပါဋ္ဌိတော် )
မိမိရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူရှိရာနေရာ၊ အရပ်သည် မွေ့ လျှော်ဖွယ်ရာဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သစ်ပင်တမ်းကလေးသည်ပင် နှစ်လိုဖွယ်ရာ မွေ့ လျှော်ဖွယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။
သို့ ပေမယ့် ဤသည်လို ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူမျိုးကို ရဖို့ မလွယ်။
တွေ့ ဖို့ ရာမလွယ်......မလွယ်လှချေတကား။
ဆရာတော်ဘဒ္ဒန္တနန္ဒမာလာဘိဝံသ( MA,PhD ) ဟောကြားသောတရားတော်များ...
ပြဿ နာတွေ၊ ဒုက္ခတွေ
သူတို့ ဆွတ်ခူးနိုင်တာ နှစ်ခုရှိတယ်
အဲဒါကတော့ ဗီလိန်ဘွဲ့ နဲ့ အ၀ီစိလက်မှတ်ပါပဲ...။
ချီးမွမ်းခြင်း (သို့ မဟုတ်)
ပြစ်တင်ခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်း ၊
ချီးမွမ်းခြင်း (သို့ မဟုတ် )
သူတော်ကောင်းဖြစ်စေချင်ရင်
ငါပြောသလိုလုပ် ငါလုပ်သလိုမလုပ်နဲ့ ဆိုတဲ့
အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သလို
a limitless heart with regard
all living beings;
you will know complete peace
အချို့ လူတွေနဲ့ တွေ့ ရ
အကြီးမားဆုံး ဆုံးရှုံးမူ့ ဖြစ်တယ်။
*စိတ္တံ ဒန္တံ သုခါဝဟံ*
The best ethic is to
empathize the others.
It is sure that you must die,
is only one true.
Death is not fearful.
But, the act of
SIN BEFORE DEATH
is really fearful.
ဘယ်တော့မှ မမွေးမိပါစေနဲ့ ။
the miserable mind of
lower class that
you will get profit
Morality ( Sila)
Wisdom (Pjin njr)
အမှန်တရားတွေ ခေါင်းငုံ့နေရတဲ့အချိန်ရှိပေမယ့် အမှန်တရားကို ဘယ်တုံးကများ အနိုင်ရဖူးတာရှိသလဲ? ရိုးဖြောင့်ခြင်းဖြင့်သာ အလှဆင်ကြပါလေ ..... ။ ယုံကြည်မှုကို မမှန်ကန်တဲ့နည်းနဲ့ တည်ဆောက်လို့ မရနိုင်ပါဘူး။
Do not made friendships
Or vapid men
seeking only evil.
When sometimes these types
Seeming to befriend you
Atadistance stay,
Then your welfare
Perfect will be
your inner world,
the simpler the outside world is
Ashin Acara ( MR MRT )
The Morally Pure Person
The ocean can not be
The Myinmo mountain
The rock can not be
melted by water.
So also the morally
by the misdeeds of
an evil-minded person.
Myinmo = Meru
သည်းခံခြင်းဟာ ပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အားဆိုတာတော့ မမေ့ပါနဲ့..
( Ashin Dhammapala )
ကိုယ့်ဘ၀ရဲ့ အနိမ့် အမြင့်၊
ကိုယ့်ရဲ့ အလုပ် ကိုယ့်ရဲ့ အပြော
သူယုတ်မာ ဟု နှစ်မျိုးရှိ၏။
(ဘဒ္ဒန္တ ရာဇိန္ဒ မဟာထေရ်
( ဒေါက်တာနန္ဒမာလာဘိဝံသ )
*မဟာစည် ဆရာတော် သြ၀ါဒ*
A good friend who points out
and rebukes evils is
as if revealsasecret of
Not on what they've done or
Not done yourself.
( Dhamma Garden )
ကြမ်းတမ်းသော စကားကို မဆိုနှင့်
မေတ္တာနှင့် ယှဉ်သောစိတ်ကို ဖြစ်စေရမည်။
"ဓမ္မဒူတ ဆရာတော် သြ၀ါဒ"
Lotus Foundation of Myanmar
ခုနှစ်ဆယ့်လေးကြိမ်မြောက် တရားဦးဓမ္မစကြာ ပူဇော်ပွဲ... - Saturday, July 1, 2017 လစဉ် ပထမစနေနေ့တိုင်း ပူဇော်မြဲဖြစ်သော တရားဦးဓမ္မစကြာကို ပါဠိမြန်မာ နှစ်ဘာသာဖြင့် ၂၀၁၇-ခု ဇူလိုင်လ ၁-ရက် နံနက် ၉-နာရီတွင် စုပေါင်း ရွတ...
တုံ့လှည့်မေတ္တာစာစဉ် (၁၂) - *ပညာရေး၊ လမ်းသွားဟန်လွဲနှင့် အလုပ်* တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ် မှာယူရန် (၁) မျိုးဆက်သစ်စာပေ၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း-၀၉ ၄၂၀ ၂၂၂ ၉ ၆၂ (၂) စမိုင်းလ်၊ ရန်ကုန်၊ ဖုန်း ၀၉ ၇၉၀ ၂၂၆ ၈...
Ignorance – Ashin Pyinnya Thiha -
Wisdom of Dhamma( ဘုန်းဉာဏ်)
ငြိမ်းချမ်းရေး အလှတရားဖြင့် လောကကို ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း - ငြိမ်းချမ်းရေး အလှတရားဖြင့် လောကကို ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း *************************************************************** ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ငြိမ်းချမ်းဖို့ရော၊ လေ...
ဒုိုင်ယာရီအပုိုင်းအစလေးများ (၃၇) ရုံးသုံးဘာသာစကား များသောနုိုင်ငံ - ဆက်လက်၍ အေဒီ (၁၃) ရာစုနှစ်တွင်တည်ဆောက်ခဲ့သော ရှေးဟောင်းခရစ်ယန်ဘုရားရှိခုိုးကျောင်းကြီးသုို့သွားရောက်လေ့လာကြသည်။ ဘုရားကျောင်းကြီးသည်မြင့်လည်းမြင့်မားသည်...
၀ိနယ ကုက္ကုစ္စ - မန်းသာသနာ့တက္ကသိုလ်ကြီးတွင် ဘီ အေ၊ အမ် အေ စသည်တို့ကိုစနစ် တကျသင် ကြားပေးသည်။ ဘီ အေ စတုတ္ထနှစ်ဖြေပြီးလျင် လက်တွေ့သဘောမျိုးဖြင့် ဆယ်ရက် တရားထိုင်ရသည်။ အမ် အေ ကေ...
ဘာ့ကြောင့်ငြိမ်ငြိမ်ထိုင်ရတယ် (လောကဓမ္မ ဒဿနစာစုများ) - ဤစာအုပ်တွင်- - ဘာသာဝင်ဦးရေတိုးအောင် သာသနာပြုသင့်သလား။ - သားရှင်ပြုအလှူ လှူကြသူများအကြောင်း။ - ညီချင်လျှင် ညွတ်ပေးရသည့် သီအိုရီ။ - တရားအားထုတ်မှုနှင့် ပတ်သက်သ...
Yin Thinn Ei's Dhamma House ယဉ်သင်းအိ ဓမ္မရိပ်သာ
ပဲခူး အောင်သုခ ဆရာတော်ဘုရားကြီး - ပဲခူး အောင်သုခ ဆရာတော် ဦးစန္ဓိမာ ဟောကြားတော်မူသောတရားတော်များ
Ph.D ဒေါက်တာ ဆိုတာ ? - ယခုကာလပိုင်းအတွင်း ပြည်တွင်းကရော ပြည်ပကပါ ဒေါက်တာ အထူးသဖြင့် ဂုဏ်ထူးဆောင် ဒေါက်တာဘွဲ့ပေးတာတွေ၊ ရတာတွေ၊ ဂုဏ်ပြုတာတွေ ဖတ်နေ၊ ကြားနေ၊ သိနေရပါတယ်။ ဒါကြောင့် မ...
၉၆၉-ဆိုတာ ဘုရားဟောမဟုတ်ဘူး။ သူများဘာသာကို လိုက်ပြီးတုနေတာလို့ ပြောတဲ့သူတွေအတွက် သိစေချင်လို့။ ၉၆၉-ဆိုတာဘာလဲ။ ဘယ်လဲ? - ဘာသာတိုင်းမှာ သူ့ သင်္ကေတနဲ့သူ ရှိကြပါတယ်။ ဟိန္ဒူဘာသာမှာ အထွဋ်အမြတ်သင်္ကေတဟာ-ဥုံ-ဆိုတဲ့ စာလုံးပါပဲ..အဲဒီ ဥုံဆိုတဲ့ စကားလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ဘုရားသုံးဆူဖြစ်တဲ့ ဗြာ...
ဆရာတော်အား လာရောက်ဖူးမြော်ကြသော ဧည့်သည်တွေ - ဒီကနေ့ ထိုင်းနိုင်ငံ ချင်းမိုင်မြို့မှ ဧည့်သည်တွေ ဆရာတော်အားလာရောက်ဖူးမြော်ကြသည်။ အရှင်ကုမုဒ
*~~~45 ယောက်မြောက် အမေရိကန်သမ္မတကျမ်းသစ္စာဆိုခြင်း~~...